3000w cob inotungamirwa chirimwa kukura mwenje China Manufacturer
PH Mitsara yakasarudzwa
Main Markets: Americas , Europe , Worldwide , Africa
Tsanangudzo:3000w Kura Chiedza,3000w Yakatakurwa Mwenje,Cob Kura Mwenje
Marijuana Kukura Mwenje
Akarerekera Kuwedzera Mwenje Kwemiti
Kutengeserana Kukura Mwenje
Yakakonzera Kukura Chiedza
LED Aquarium Light
Led Aquarium Chiedza Kwezvirimwa
Led Fish Tank Lights ne Remote
Led Aquarium Chiedza Nenguva
 HomeProductsPH COB SeriesPH-B-L63000w cob inotungamirwa chirimwa kukura mwenje
3000w cob inotungamirwa chirimwa kukura mwenje
USD 260 - 280 / Piece/Pieces
200 Piece/Pieces USD 260 / Piece/Pieces
100 Piece/Pieces USD 270 / Piece/Pieces
Muenzaniso Nha.: PH-B-L6
LED Chips: CREE, Cree CXB3590
Certification: CE, RoHS, CCC, FCC, EMC
Kupa Mazano: 2000pcs/month
Phlizon 3000w cob inotungamirwa chirimwa kukura mwenje
Phlizon `s COB nhepfenyuro inokura mwenje unobuditsa midhiya yese yechiedza iyo inogona kunyatsozadzwa nezvidyarwa kuti zvidyirwe. Yakanyanya kuzara Spectrum Yakagadzirirwa kunyatsoenzanisa nzvimbo dzakakura dzezvivakwa zvemukati , kunyanya Medical Medical.One yedu yevatengi mhinduro, Phlizon yakazara yakazara spectrum cob inotungamirwa kukura mwenje yakafanana neOptic LED mwenje, asi inodhura zvishoma uye inokupa iwe yakawanda kuburitsa.
3000w cob inotungamirwa inokura ficha 6 COB: vanodzika chenauchena mwenje mwenje nehuremu hwe3000K (ine yakawanda tsvuku) uye inotonhorera chena chena ine tembiricha tembiricha ye6000K (inorema mubhuruu).
Iyo COBs inowedzeredzwa ne10w diode: 110pcs 630-660nm, 12pcs 470nm, 12pcs 6500k, 4pcs UV, 6pcs IR
Phlizon 1000/2000/3000 watt yakazara COB yakatungamirwa kukura mwenje , inokupa iwe sarudzo dzakawanda apo zvidyarwa zvako zvinoda simba rakasiyana rekuvhenekera.
COB lenzi yakateedzera, yakakura simba yakadzvanywa CREE COB ine yakakwira Par kukosha uye yakadzika kupinza
VEG / BLOOM uye STRONGER zvinoshandurwa padanho rega rega rekukura.
Yakasarudzika Special yekudyara inokura kuti iwedzere goho.
Kuvaka Kuti Mukukohwa: Kunobatsira seeding kusvika fruiting chikamu.
Mhando dzakanaka mafani ane akadzika ruzha.
Zviri nyore kuisa neminiti . Kuchengetedza Simba, zvine hushamwari
3-5 Makore Waranti
1000w 2000w 3000w akatungamirira kukura chiedza parameter
COB yakatungamirwa ikure mwenje c ompare kune yetsika HPS / MH inokura yakareruka
CHII CHINOTAURWA NECHOKWADI ISU YAKAKURA RUOKO?
1.PPFD Kukosha: PPFD ndeye Photosynthetic Photon Flux Density. Paunosarudza mwenje wechiyero, unofanirwa kuenzanisa iyo PPFD kukosha kwemarambi akasiyana emuti. Yakakura kukosha, zvirinani kukura kwechirimwa.
2 .Actual Power: Nekuti iwo chaiwo masimba echiedza chirimwa chinosiyana nemamiriro akasiyana, vese vatengesi veAmazon vanoshandisa iro rakapihwa simba kurondedzera masimba echigadzirwa nekuti iro rakaganhurirwa simba rinogara riripo. Paunosarudza LED ichikura mwenje, iyo yakaganhurirwa yesimba rekudyara chiratidzo, uye chakanyanya kukosha isimba chairo.
3.Core Coverage: Pamusoro peiri pamusoro, paunosarudza chiedza chechirimwa, iwe zvakare unofanirwa kuenzanisa nzvimbo yekuvhara yemarambi akasiyana emuti, hongu, ukuru hwepakati yekuvhara nzvimbo. Kazhinji, mudanho rekumera, unogona kusungira iwo muti wechiedza kumusoro uye nzvimbo yekuvhara yakakura. In inoyerera chikamu unogona kuturika chirimwa chirimwa pazasi uye nzvimbo yevhavha idiki nekuti chirimwa chinoda yakawanda mwenje panguva ino. Iwe unofanirwa kuenzanisa nzvimbo dzakasiyana dzekuvhara kuti usarudze mwenje wechirimwa unokodzera iwe.
Hydroponics, Horticulture, Kwekurima uye Greenhouse
Kurima, Ratidziro, Bindu, Imba, Urban, Bonsai, uye University Lab
Kutakura uye Kutakura
1. UPS / DHL / FEDEX / TNT / EMS yemasampuli , Door-to-Door;
2. Nemhepo kana neNyanza nezvebatch zvinhu .
3. Vatengi vachidudzira vatakuri vekutakura zvinhu kana nzira dzinotakurika dzekutumira!
4. Nguva yekutumira : stock iripo sampuro ichaendeswa pakarepo; 3-7 mazuva ekurairwa kwekutongwa; 7- mazuva makumi maviri nemashanu emabhech zvinhu
Kubhadhara: T / T, L / C, Paypal, 30% deposits, 70% chiyero usati waendeswa
MOQ: mhando yekuraira inogamuchirwa
Phlizon inonyanya kukoshesa LED inokura marambi emhando dzakasiyana dzakadai sekurapa, hurumende, mauto, kutengeserana, uye zvekurima .Makore anopfuura gumi aine ruzivo rwekutsvagisa uye timu yekuvandudza anotarisana nekukura kwechiedza.Many yakawanda yakawana iyo National Patents, Zvese zvigadzirwa zvakapfuura FCC uye ETL certification . Isu tinopa High mhando nemutengo wakanyanya-unobudirira.
Product Categories : PH COB Series > PH-B-L6
PHLIZON CREE COB LED Kura Chiedza cxa2530 Hydroponic Bata Ikozvino
Chaiyo Simba 630watt COB 3000W Kukura Chiedza Bata Ikozvino
2019 New Arrival Phlizon LED Chekukura Chiedza Chiedza Bata Ikozvino
Phlizon Cree COB 630W Yakatakurwa Chiedza Bata Ikozvino
Phlizon COB 600W LED Indoor Kura Mwenje Bata Ikozvino
EU / US Philzon COB LED Kura Mwenje Mari Bata Ikozvino
Phlizon 600W COB LED Kura mwenje Bata Ikozvino
Yakanakisisa COB Kura Chiedza US Inventory Bata Ikozvino
Dimmable 600W CXB 3590 COB Chiyero Yekukura Chiedza
Waterpoof Phlizon LED Kura Chiedza 240W US Stock
Phlizon 640W Samsung izere Spectrum inokura Bar
New Folding chirimwa LED Kura Chiedza Chizere Spectrum
EU / US Warehouse Stock Cree COB LED Kukura Chiedza
Waterproof Vertical Kurima LED Kudza Chiedza
ISE Kudza Mwenje Bar Strip Hydroponic Indoor
Spider 5 Cob Mbeu Kukura Mwenje Hydroponic
2019 Wifi Akatungamira Aquarium Mwenje Coral Reef
LED Kura Chiedza ne Samsung Chips LM301B & Dimmable
800W Indoor Medical Plant LED Kura Chiedza
Yakanakisa Cree COB Kudza Mwenje
Pasina mafoni Samsung Quantum Yakatakurwa Kukura Chiedza Bar
Commerce Horticulture Samsung LED Kura Bar Chiedza
Hydroponic Kudyara Kwekukura Tende neWindows
3000w Kura Chiedza
3000w Yakatakurwa Mwenje
Cob Kura Mwenje
3000k Kura Chiedza
800w Kura Chiedza
2000W Kura Chiedza
300W Kukura Chiedza
3000 Watt Kura Chiedza
Copyright © 2020 Shenzhen Phlizon Technology Co.,Ltd. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.